'Back 4 Blood' ọhụrụ Trailer jupụtara na ọtụtụ nke Zombies na-emekọ ihe
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Back 4 Blood' ọhụrụ Trailer jupụtara na ọtụtụ nke Zombies na-emekọ ihe
by Trey Hilburn III June 10, 2021
by Trey Hilburn III June 10, 2021 1,892 echiche
Egwuregwu Warner Bros. Egwuregwu na Turtle Rock Studios ' Azụ 4 Ọbara dị elu na ndepụta anyị nke ọtụtụ egwuregwu egwuregwu na-atụ anya n'afọ a. Ichere rue Ọktọba adịghịkwa anya. Naanị ihe dị mkpirikpi, wụfee ma wụpụ. The ọhụrụ trailer maka Azụ 4 Ọbara na-agbadata na ogbugbu nke ihe niile na-egbu n'aka gị na ndị ọrụ ibe gị.
Na nchịkọta akụkọ maka Azụ 4 Ọbara na-aga dị ka nke a:
Back 4 Ọbara bu onye mbu zoro zombie nke si n’aka ndi okike nke Ekpe 4 Nwụrụ anwụ aha na atụmatụ na-akpali akpali, ike oge-na-oge gameplay na ukwuu agbanwe, customizable edinam na-Player na-abịa azụ n'ihi na Ọzọ. Ihe Back 4 Ọbara Akụkọ na-ewere ọnọdụ mgbe ọdachi dakwasịrị ebe ọtụtụ mmadụ nwụrụ ma ọ bụ butere ya site n'aka ajọ Ekwensu Worm. O siiri ha ike ikwusi okwu ike ma nwee obi ike ịlụ ọgụ n'ihi na onye ikpeazu mmadu, otu ndi agha nke apocalypse ndi anakpo ndi nchacha achikota iji wepu ihe ojoo ojoo dika Ridden ma weghachite uwa.
I nwere ike ịgafere Ebe a tdeba aha gi n’egwu egwuregwu a n’isi mbido beta. August 5-9 na-ahụ mmalite mmalite oghere beta na beta emeghe emeghe na-agbadata August 12-16.
Back 4 Ọbara dị n'ihi na Usoro Xbox X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 na PC bido Ọkt. 12.
Ya-Nwoke alaghachila na Netflix na Nna-ukwu nke Eluigwe na Ala: Mkpughe. Gụkwuo ebe a.